Alkemy X ၏ Andy အဆိုတော်သည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်မှတစ်ဆင့်စားသုံးသူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းတွင် NATPE အဖွဲ့ကို ဦး ဆောင်မည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » နာမည်ကြီးတံဆိပ်အကြောင်းအရာမှတစ်ဆင့်စားသုံးသူထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့အပေါ် NATPE Panel ကိုပို့ဆောငျဖို့ Alkemy X ရဲ့အန်ဒီအဆိုတော်
session ကိုလည်း Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ် Snapchat နှင့် AARP ကနေအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုများပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
NATPE မိုင်ယာမီမှာ NEW YORK CITY-, ရုပ်မြင်သံကြား၏ Alkemy X ကိုမှ Executive Vice နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအန်ဒီအဆိုတော်ရှေ့ဆက်-စဉ်းစားတွေးခေါ်အမှတ်တံဆိပ်ဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးအားဖွငျ့စားသုံးသူနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဖန်တီးမှု, နည်းလမ်းသစ်တွေရှာဖွေနေကြသည်ကိုဘယ်လိုအပေါ်တစ်ဦး panel ကဆွေးနွေးမှုဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုတော်သူတို့နက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောနည်းလမ်းပရိသတ်တွေထိတွေ့ဆက်ဆံနေချိန်တွင်သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်တခုအဖြစ်မှထုတ်လုပ်ထားသောထူးခြားတဲ့, အောင်မြင်မှုများအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ် Snapchat နှင့် AARP မီဒီယာမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူစကားပြောပါလိမ့်မယ်။ ခေါင်းစဉ် တီထွင်ဖန်တီး Powering အမှတ်တံဆိပ်, အဲဒီ session ဇန်နဝါရီလ 23 ဘို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်rd2မှာ: အ Fontainebleau မိုင်ယာမီကမ်းခြေရဲ့ရောင်ခြည်အနည်းငယ် Ballroom အတွက် 45 pm တွင်။
" ပို. ပို. စားသုံးသူကိုဘယ်လိုအဘယ်မှာသူတို့ content တွေကိုလောင်ကိုပြောင်းလဲအမျှအမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သတင်းစကားကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအစဉ်အလာရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာမှအခြားရွေးချယ်စရာရှာဖွေနေပါတယ်" ဟုအဆိုတော်ကပြောပါတယ်။ "Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ် Snapchat နှင့် AARP တူသောအမှတ်တံဆိပ်အဖွဲ့ဟာကြည့်ရှုတကယ်မြင်ချင်ကြောင်းအရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။ ဤရွေ့ကားကုမ္ပဏီများသည်ယနေ့လူ content တွေကိုစားသုံးနေကြပုံကိုအတူညှိ၌ရှိကြ၏နှင့်၎င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းအရာစားသုံးမှုသို့ fit ဘယ်မှာလေ့လာသင်ယူကြသည်။ ဒါဟာဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စားသုံးသူများအဘို့, အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအနိုင်ရရှိပါတယ်။ "
အဆိုပါ panel ကိုအပေါ်အဆိုတော်လာရောက်ပူးပေါင်းမာ့ခ် Battaglia, အလုပ်အမှုဆောင်ကို Creative ဒါရိုက်တာ, Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်ဟိုတယ်ဖြစ်လိမ့်မည် Rita Drucker, အမှတ်တံဆိပ်ပေါင်းစည်းရေး, Snapchat ၏ဦးခေါင်း, နှင့် Myrna Blyth, အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌနှင့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်ဒါရိုက်တာ AARP မီဒီယာ။
"ဒီ session တစ်ခုအကြောင်းအရာ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆိုအဘို့ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုအဆိုတော်ကဤသို့။ "အနာဂတ်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိတော့ရိုးရာရုပ်မြင်သံကြားမှသိမျး captivates အကြောင်းအရာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်အလုပ်လုပ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဖြန့်ဖြူးပိုင်။ သင်တစ်ဦးပရိုဂရမ်မာလျှင်, အမှတ်တံဆိပ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမိတ်ဖက်အဖြစ်သင့်အစီအစဉ်များသို့ပေါင်းစည်းခံရဖို့ရှိသည်။ "
Alkemy X ကိုမှာအဆိုတော် over-the-ထိပ်တန်းနှင့်လူမှုရေးဆိုင်များတွင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်, linear များအတွက်ဖျော်ဖြေရေး series နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပုံစံ programming ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဖြန့်ဖြူးနဲ့အလုပ်လုပ်မယ့်ထုတ်လုပ်မှုအသင်းဦးဆောင်နေသည်။ ရှည်လျားသော-running စားနပ်ရိက္ခာကွန်ယက်စီးရီးထုတ်လုပ်သူများ စားသောက်ဆိုင်: Impossible¸ Alkemy X ကိုအခြားသူတွေအကြား, BMW ကား, Pepsi, Panera, Lexus, Google နဲ့ Samsung တို့အဘို့အ Multi-Platform ကိုအကြောင်းအရာတီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုတော်ယခင်ကသူကဲ့သို့သောပွဲများနောက်ကွယ်မှရှိရာခရီးသွား Channel ကိုမှာအထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် တောင်တက်အမည်မသိ, Impossible ဟိုတယ် နှင့် ထူးထူးဆန်းဆန်းအစားအစာများ Amerတစ်ဦး။ သူလည်း DIY ကွန်ယက်နှင့် HGTV မှာအလုပ်အမှုဆောင်ရာထူးကျင်းပခဲ့တယ်။
ဘာ: တီထွင်ဖန်တီး Powering အမှတ်တံဆိပ်
အဘယ်မှာ: NATPE မိုင်ယာမီ, Fontainebleau မိုင်ယာမီကမ်းခြေ, တောထဲမှာလှလိုက်တာ Ballroom
ဘယ်တော့လဲ: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 23, 2019, 2: 45 pm တွင် - 03: 30 pm တွင်
ဟောပြော: အန်ဒီအဆိုတော်, ရုပ်မြင်သံကြား၏အမှုဆောင်ဒုသမ္မတနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာ, Alkemy X ကို; မာ့ခ် Battaglia, အလုပ်အမှုဆောင်ကို Creative ဒါရိုက်တာ, Marriott ဟာဒီအမှုမပေါ်ဟိုတယ်; Rita Drucker, အမှတ်တံဆိပ်ပေါင်းစည်းရေး, Snapchat ၏ဦးခေါင်း, နှင့် Myrna Blyth, အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌနှင့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်ဒါရိုက်တာ AARP မီဒီယာ။
Alkemy X ကိုကြော်ငြာ, branded အကြောင်းအရာ, ကွန်ယက်ကိုတီထွင်ဖန်တီးမှု, ဘက်ပေါင်းစုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ဒစ်ဂျစ်တယ် / လူမှုရေးအစပျိုး long-form ကို unscripted ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode TV နဲ့ကြော်ငြာများအတွက်အမြင်သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ Advertising ကြော်ငြာနှင့် branded အကြောင်းအရာ clients များ BMW ကား, Pepsi, Panera, Lexus, Google နဲ့ Samsung တို့ပါဝင်သည်။ အထူးနှုန်းများ, ဘက်ပေါင်းစုံနှင့်လူမှုရေး clients များ Nickelodeon, Syfy, AMC, TruTV နှင့်စားနပ်ရိက္ခာကွန်ယက်များပါဝင်သည်။ အဆိုပါ VFX အဖွဲ့ AMC ရဲ့အပါအဝင်စီးရီးအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ် အဆိုပါ Walking Dead ကိုကွောကျရှံ့ အား NBC'' s ကို Blindspot, HBO ရဲ့ အဆိုပါစားကြွင်းစားကျန်, Netflix ရဲ့ အရူးနဲ့ Amazon ရဲ့ အဆိုပါအံ့ဖွယ်မစ္စစ် Maisel.
စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များ ပေါင်းစည်းမှု natpe လှံ & Arrows ကုန်သွယ်မှုပြပွဲ တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-01-08
ယခင်: ChyronHego နှင့်မြက်ချိုင့်ရေးအဖွဲ့ Up ကိုပေါင်းစည်းဂရစ်ဖစ်ဖန်ဆင်းခြင်းကယ်ယူနှင့်အားကစားဆိုင်ရာ Arena များအတွက်ဖြေရှင်းနည်းသို့ပြောင်းပါမှ